काठमाडौंमा बसेर लण्डनमा छु, विवाह गर्छु भन्दै ठग्ने महिला पक्राउ « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं, असोज १९ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् नक्कली आइडी बनाई काठमाडौंमा बसेर ‘लण्डनको नागरिक हुँ, लण्डन छु, विवाह गर्छु’ भन्दै ठगी गर्ने महिला पक्राउ परेकी छन्।
महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले रूपन्देही सैनामैना नगर-११ सालझण्डीकी ३१ वर्षीया सीता भुषाललाई पक्राउ गरेको हो। हाल उनी काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरि नगरपालिका-७ गुर्जुधारामा आफ्ना बुवासँग बस्दै आएकी थिइन्।
उनले ठगी गर्न फेसबुकमा डा. जेम्स सोनार र जेम्स एन्डी नामबाट नक्कली आइडी खोलेकी छन्। त्यसबाट अरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेष्ट पठाइ आफू लन्डनको नागरिक हुँ भन्ने गरेको महाशाखाले जनाएको छ।
त्यस्तै, उनले पुरूषहरूलाई विश्वास जित्न विवाह समेत गर्छु भन्ने गरेकी थिइन्। कुराकानीपश्चात् जन्म दिनको अवसरमा सरप्राइज गिफ्टमा सुनको सिक्री, आइफोन, र २० हजार डलर पठाएको छुँ भन्ने गरेको महाशाखाले जनाएको छ।
मन जित्न उनले त्यसको फोटो समेत पठाउने गर्थिन्। त्यसरी प्र’लोभनमा पारेपछि उनले लाखौं रकम ठ’गी गर्ने गरेको आ रोपमा पक्राउ गरेको हो। उनले विभिन्न व्यवसाय चलाउनको लागि पैसा समेत माग्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
यी राशिका व्यक्तिले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ, कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ? सबैले जान्नुहाेस